သက်စွန့်ကြိုးပမ်းခဲ့သော မီးသတ်သမားများကို အားပေးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သက်စွန့်ကြိုးပမ်းခဲ့သော မီးသတ်သမားများကို အားပေးခြင်း
သက်စွန့်ကြိုးပမ်းခဲ့သော မီးသတ်သမားများကို အားပေးခြင်း
Posted by padonmar on Jan 6, 2012 in Creative Writing, Photography | 12 comments
စက်ဆန်းမီးလောင်ရာမှာ မီးသတ်သမားလေးတွေ သေသူသေ ဒဏ်ရာရသူရဖြစ်တဲ့ သတင်းကြားရတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ မီးသတ်တွေကြားမှာ
ကျွန်မတို့ မိတ်ဆွေတစ်စုလည်း မီးဘေးပေါက်ကွဲမှုဘေးခံခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခရောက်ရှာသူတွေကို အားပေးကူညီရင်း
ဒီမီးလောင်မှုမှာ အသက်စွန့်သွားတဲ့ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးလုံးဟာ တာမွေမီးသတ်ကဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ပြင်ကနေ မေးသွားတော့ ကျောက်မြောင်းဈေးရှေ့မှာရှိတဲ့ တာမွေမီးသတ်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တာမွေမီးသတ်ကို ဦးတည်ပြီး သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ လက်ထဲကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဂုဏ်ပြုထောက်ပံ့ငွေပေးရင်းအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
လူပုံတွေပါနေလို့ ဒီဓာတ်ပုံတော့ မတင်တော့ဘူး။
ဒဏ်ရာရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက သူတို့အတွေ့အကြုံရှင်းပြပါတယ်။
မီးလောင်ပြီဆိုရင် မီးလောင်ခံရတဲ့ အိမ်ရှင် လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့နေရာကို အန္တရာယ်ရှိလို့ စွန့်ခွာသွားကြပါတယ်။အဲဒီလိုအချိန်မှာမှ မီးသတ်တွေက
အန္တရာယ်ကိုချဉ်းကပ်ရတာပါတဲ့။သူဆိုရင် ပေါက်ကွဲမှု အရှိန်ကြောင့် ပေ၂၀ လောက်လွင့်သွားရပါတယ်တဲ့၊သတိလည်း ခဏလစ်သွားပါတယ်တဲ့။
သူက လက်မှာဒဏ်ရာရတာပါ။ကျန်တဲ့သူတွေက ဆေးရုံကမဆင်းကြရသေးပါဘူး။
စမ်းချောင်းနဲ့ ကျောက်တံတားက မီးသတ်တွေလည်း ဒဏ်ရာရကြပါတယ်။
အခွင့်သင့်ရင်တော့ သူတို့အတွက်လည်း အားပေးကူညီချင်ပါတယ်။
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ One More က သိန်း၂၀ လှူသွားပါတယ်။
အဘဖော post ထဲက ဆူးရဲ့ comment လေးကို ပြန်ပြီးမှီငြမ်းချင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးမယ့် မီးသတ်သမားလေးတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေ၊နည်းပညာတွေ အမြန်ဆုံး ရရှိပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
စက်ဆန်းမှာဖြစ်တဲ့မီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုမှာ မီးသတ်တွေရောက်လာပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်မှာ ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီး မီးသတ်တွေအပါအ၀င် ပြည်သူတွေ သေကြေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ် ၊ ဒါအားလုံးသိပြီးသားပါ ထူးခြားတာက အဲဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာ ရသွားတဲ့အထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်က တိုင်းမှူး ဦးကြည်ဝင်းပါနေတယ်ဆိုတာပါဘဲ ဒါဆိုရင် ဒီမီးသတ်တိုင်းမှူးဟာ မီးလောင်လောင်ချင်း သူ့တပည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ မီးလောင်တဲ့နေရာကို ချက်ချင်းဆိုသလို ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ် ၊ နောက်ပြီးမီးလောင်တဲ့ အချိန်က နေ့ခင်းရုံးချိန်ဆိုရင် သိပ်မထူးခြားပါဘူး ခုဟာက ညသန်းခေါင်ကျော် ကြီးမှာလောင်တာ ဆိုတော့ သိပ်ကို ထူးခြားသွားပါပြီ ။
မီးလောင်တယ်လို့ မီးသတ်က သတင်းရရချင်း သူ့ကိုအကြောင်းကြား ၊ သူကအိပ်ယာကချက်ချင်းထ ၊ မျက်နှာသစ် ယူနီဖေါင်းဝတ် ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ကားကို ကိုယ်မောင်းသွားရင်တောင် ဒီလောက်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို မရောက်နိုင်ပါဘူး ၊ ပြည်သူတွေ အိပ်နေချိန်မှာ မီးလောင်ရင် တော့ဒုက္ခပါဘဲ ငါစောင့်နေမယ် မအိပ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့ တိုင်းဦးစီးမှူးကြီးပါဘဲ ၊ တိုင်းပြည်အတွက် အားထားရတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကြီးပါဘဲ ၊ လူထုအပေါ်သိပ်ကိုတာဝန်ကျေတဲ့ ပြည်သူ့ သားကောင်းကြီးပါဘဲ ။ ဦးကြည်ဝင်းသာ ကျန်းမာရေးအရ တာဝန်ဆက်ပြီးထမ်းဆောင်နိုင်ဘို့ အခြေအနေပေးလို့ သူသာ ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ်ဦးစီးမှူးကြီး ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းက ပြည်သူတွေဟာ မီးလောင်ရင် တို့ဦးကြည်ဝင်းရှိတယ်ကွ ဆိုပြီး အားကိုးလောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ပါဘဲ ၊ မချီးကျူးပဲ နေကို မနေနိုင်ဘူးဗျာ
ပေါက်ကွဲမှုအဖြေရှာဖို့ တွင်းထဲက ကျန်နေတဲ့ရေတွေကို ရေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ မီးသတ်များ
မီဒလောင်တာငြိမ်းသတ်ပြီးလည်း မီးသတ်ရဲ့ တာဝန်တွေ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေရတာလေး သိသာအောင်ကျန်နေတဲ့ပုံလေးပါ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ကျဆုံးသွားတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါတယ်။
တစ်ချို့ ဆို အတော်လေး ငယ်ရှာကြသေးတယ်။
ပြည်သူတွေ ရဲ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်အတွက် သူတို့ ရဲ့ အသက်တွေ ကိုပေးဆပ် ခဲ့တာပါ။
မပဒုမ္မာ ပြောသလို မြန်မာပြည်သူ/သား တွေကြား မှာ သူတို့ ဟာ သူရဲကောင်းတွေ အဖြစ် သမိုင်း ကိုကောင်းအောင်ပြန် ရေးခဲ့ကြပါပြီ။
ဒီလို စေတနာ နဲ့အလုပ်လုပ် ပြခဲ့ရင် လူ သေရင်တောင် နာမည် မသေဘဲ လူအများ တသလွမ်းဆွတ် ကျန်ခဲ့ တယ် ဆိုတာ တစ်ခြား သူများ လဲ အားကျ အတုခိုးသင့်ပါတယ်။
အဲလို အကျိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ လဲ ကောင်းရာဘုံဘဝ ကနေ သာဓု အနုမောဓနာ ခေါ်ပြီး ပီတိဖြစ်နေကြ မှာပါ။
ကျွန်မ အထင်တော့ အခုလို ပေါက်ကွဲတာမျိုးဟာ အဆင်အတန်းမှီ safety အဝတ်တွေ ဝတ်ထား ရင်တောင် လုံခြုံပါ့မလားလို့။ ဒါမျိုးထပ် မဖြစ်အောင် သိုလှောင်ရုံ နဲ့ သိုလှောင်ပစ္စည်း ထားရှိမှု တွေကို အသေအချာ စီစဉ်ဖို့ လိုမလားပါဘဲ။
ဒီလို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နဲ့ သွားရောက်အားပေးခဲ့တာကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ဆထက်တပိုး ပေးကမ်းလှူဒါန်း နိုင်ပါစေ လို့လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုလဲဂုဏ်ယူသလို မသေပေမဲ့သေရာပါဒဏ်ရာတွေနဲ့ဒုက်ခိတဖြစ်နေကြမဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက်လဲအများကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူတို့ကိုလဲရဲသီဟ၊ ရဲသူရဘွဲ့ချီးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကလဲအသက်စွန့်သွားသူတွေနဲ့ထပ်တူစွန့်လွှတ်စွန့်စားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ တယောက်ဆို တခေါင်းလုံးမီးလောင်သွားတာမျက်လုံးပါပါသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဘ၀ကလဲအသက်မစွန့်လိုက်ရပေမဲ့ဘ၀စွန့်လိုက်ရတာပါပဲ။ သူတို့တွေကိုလဲကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ထပ်တူဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
မီးသတ်ရဲဘော်တစ်ယောက်ဆီက ကြားဖူးတာတော့ သူတို့က မီးကိုမြင်နေရရင် မကြောက်ဘူး။ မီးဆိုရင်နီးမှဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ သူတို့က မီးနဲ့ အနီးဆုံးကို ရောက်အောင်သွားပြီး ငြိမ်းသတ်ကြပါတယ် တဲ့။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လို့ အဲဒီနေရာမှာ ရှိတဲ့လူတွေက စွန့်ခွာတဲ့အချိန်မှာ မီးသတ်သမားတွေက မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ငြိမ်းသတ်ဖို့ အရောက်သွားရတာပါ။
အောက်ဆုံးက ပုံလေး ကြည့်ရအောင် ..
လို အပ်နေတာတွေ က အများကြီး ။
Safety Helmet ဆောင်းထားတာ နှစ်ယောက် ၊ မဆောင်းထားတာ သုံးယောက်။
ဘာ ဖိနပ်စီးထားလည်း မမြင်ရတာ သုံးယောက်။ မြင်ရတဲ့ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က ခြေညှုပ်ဖိနပ်နဲ့ ။ တစ်ယောက်က စီးထားတဲ့ ပုံတောင် မပေါ်ဘူး ။ အဲ့ဒီတယောက် အနီးကပ်ဆုံးလုပ်နေပြီး Mask တောင် မတတ် ထားပြန်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ တတွေ လိုအပ်နေတာတွေ အများကြီး။
၁။ ပစ္စည်း ပြည့်စုံမူ
၂။ တစ်ဦးချင်း စည်းကမ်းလိုက်နာမှု
၃။ စည်းကမ်းလိုက်နာအောင် ကြပ်မတ်မူ
ပစ္ခည်းက ပိုက်ဆံရှိရင် အလွယ်တကူဝယ်ဖြည့်လို့ရပေမဲ့ ၊
“ကျွန်မ အထင်တော့ အခုလို ပေါက်ကွဲတာမျိုးဟာ အဆင်အတန်းမှီ safety အဝတ်တွေ ဝတ်ထား ရင်တောင် လုံခြုံပါ့မလားလို့။ ဒါမျိုးထပ် မဖြစ်အောင် သိုလှောင်ရုံ နဲ့ သိုလှောင်ပစ္စည်း ထားရှိမှု တွေကို အသေအချာ စီစဉ်ဖို့ လိုမလားပါဘဲ။”
စည်းကမ်းလိုက်နာမှု နဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာအောင် ကြပ်မတ်မှု့တွေ အားနည်းနေ သရွေ့တော့….
နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ လွှတ်တော်မှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အသုံးစရိတ် ချထားပေးမှုကို လုံလောက်မှုရှိမရှိ
အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ မြို့တွင်းတွင် သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ ပြုသင့် မပြုသင့် ငြင်းခုံနေလောက်ပြီ ..
မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို တချက် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ ….
အဲဒီဂိုဒေါင်တွေက အစိုးရဂိုဒေါင်တွေကို ပုဂ္ဂလိက ကိုငှားစားနေတာလားမသိ။
ဒဏ်ရာရမီးသတ်သူရဲကောင်းများကိုလဲ ရဲသူရ၊ ရဲဗလ၊ ရဲ——အစရှိတဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူများကို သာပေးသောဆုများချီးမြှင့်သည်ဟုကြားရပါသည်။ အထူး သဖြင့်ရဲဝန်ထမ်းများသာရလေ့ရှိသောဆုများဖြစ် ပါတယ်။ မိသား စုနှင့်ထပ်တူ အထူးပင်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များမှပထမဆုံးရရှိသော ဆုများဖြစ်ပါ တယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ရှည်လိမ့်မယ် ။ ဆုတံဆိပ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ဓါက်ကိုမြှင့်တင် ပေးရာရောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဖြေရှင်းရာမရောက်လို့ကျေးဇူးမများဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ အဓိကစီစဉ်ပေးရမှာကတော့ စားဝတ်နေရေးအတွက်မီးသတ်သမားတွေရဲ့လစာကိုအဓိက စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း လက်တွေ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
အန်တီပဒုံမ္မာရဲ့ အလှူလေးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ … သာဓုခေါ်ပါတယ် ။
ဒီမီးလောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေက မီးသတ်အဖွဲ့ပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ထား ပြောင်းသွားတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ အသက်နဲ့ ရင်းပြီး အလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက် ကံတရား ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ် .. မျက်စိ တမှိတ် အတွင်းမှာတင် အရာရာဟာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ အတွက်ပေါ့ … ။
အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ အထောက်ကူပြု ပစ္စည်းတွေ အလုံလောက် ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှိစေချင်တာပါပဲ … ။ လူ့အသက်ဆုံးရှုံးရတာက ပစ္စည်းတွေ အဆတစ်ရာ ဆုံးရှုံးရတာနဲ့တောင် တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရနိုင်တာကြောင့်ပါပဲ ။
မီးလောင်မှုက ရတဲ့ သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကတော့ မီးလောင်လွယ်တဲ့ လောင်စာတွေကို အများပြား စုမထားသင့်တာရယ် ၊ နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အနီးမှာ မထားသင့်တာရယ်ပါပဲ …
“ဒီလို စေတနာ နဲ့အလုပ်လုပ် ပြခဲ့ရင် လူ သေရင်တောင် နာမည် မသေဘဲ လူအများ တသလွမ်းဆွတ် ကျန်ခဲ့ တယ် ဆိုတာ တစ်ခြား သူများ လဲ အားကျ အတုခိုးသင့်ပါတယ်။”
ကျွန်မပေးချင်တဲ့ message ကို ရှင်းအောင်ရေးပေးတာကျေးဇူးပါနော်။
တို့ပေးတဲ့၊ ဝေဖန်တဲ့၊ဖြစ်စေချင်တဲ့ အချက်ကလေးတွေလည်း သက်ဆိုင်သူတွေ သိစေချင်ပါတယ်။
မေးခွန်းကို မီးမီး မဖြေတတ်ဘူး၊
ကောင်းလိုက်တဲ့ အလှူဒါန ပါလားဗျာ။
အတုယူကြဖို့ကောင်းပါတယ် …။ တချို့က ရှိပြီးသားနေရာတွေမှာ နာမည်ကြီးဖို့လှူကြတယ်။
အဲလိုမျိုးထက်စာရင်တော့ ကျနော်လေးလေးနက်နက် သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ ..။
ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းကလူတွေနဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကြားမှာ ဒီကိစ္စသာမက အခြားအခြားသောကိစ္စများမြောင်မှာပါ မတူသောအမြင်တွေရှိနေကြပါတယ်။
ဖိနပ်စီးလေ့စီးထ မရှိတဲ့ တောကဦးကြီးကို မြို့ရောက်နေတဲ့ တူမလေးက ဖိနပ်မစီးရင် ရောဂါတွေရမယ်။
ငြောင့်စူးရင် ပြည်တည်နာကနေ အသက်ပါပါသွားမယ်၊
ဘယ်လောက်ပြောပြော ဦးကြီးက သူ့ခြေထောက်ကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ ခြေဗလာသွားရတာဘဲနှစ်သက်တယ်၊
ကတ္တီပါဖိနပ်နုနုလှလှလေးနဲ့ သူ့ခြေထောက်ကြီး မလိုက်ဖက်ဘူးလို့လည်းမြင်တယ်။
သံစူး ငြောင့်စူးတာက ချက်ချင်းမသေဘူး၊ဗိန္ဓောဆရာရှိသေး ။ သူတို့မြို့က မော်တော်ကားကမှတိုက်ရင်ချက်ချင်းသေတာလို့ ပြောသလိုပါဘဲ။
ကျွန်မတို့ လည်း ဖိနပ်စီးချင်ပါတယ်။